प्रचण्डले गरे बुहारी विना मगरको प्रशंशा - हातेमालो डेली
प्रचण्डले गरे बुहारी विना मगरको प्रशंशा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुहारी विना मगरको प्रशंशा गरेका छन् । विनाले राजनीतिमा ठुलो योगदान गरेको भन्दै भैरवनाथ गणमा समेत या’तना भो’गेको स्मरण गराए ।
‘मेरा परिवार जेलनेल या’त’ना भो’गर आएका हुन्,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डमाथि परिवारलाई बनाउनमै केन्द्रित भएको आरोप लगाएको सन्दर्भमा ऋषि धमलासँग प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा भने,‘भैरवनाथ गणमा यातना भोगर लापता बनाइएका होइनन् र ?’
यसअघि बुहारी विना मगरलाई खानेपानी मन्त्री र छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर बनाइएपछि प्रचण्डमाथि परिवारलाई पदमा लान केन्द्रित भएको आरोप लागेको थियो ।
त्यसलाई नेकपा विभाजनपछि ओलीले समेत उठाएका छन् । जवाफमा प्रचण्डले आफ्ना छोरीहरु र बुहारीले जनयु’द्ध देखि जोखिम मोलेर काम गरेको सुनाए । आफूले छोराछोरीलाई विदेश पढ्न नपठाएर क्रान्तिमा होमेको उनको भनाई थियो ।
प्रचण्डले आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको राजनीतिमा ठुलो योगदान भएको स्मरण गराए । ‘यु’द्धका बेलामा म’र्न हिंडेका होइनन् र ? जेलनेल या’तना भोगेर आएका हुन् र ? क्रान्तिमा सबै हो’भिए त्यो मेरो दोष हो,’ उनले भने,‘भैरवनाथ गणमा तीन वर्ष ला’पता भएर या’तना खा’एर ब’से ।
ओलीले आफूलाई सि’ध्या’उने उद्देश्यमा अहिउनले भने,‘केपीजीको एकमात्र उद्देश्य प्रचण्डलाई सि’ध्या’उने रहेछ ।’ प्रचण्डलाई सि’ध्या’उनका लागि गणतन्त्र नै स’खाप पार्न खोजेको आरोप लगाए ।लेको कदम चालिरहेको आ’रोप लगाए । उनले ओलीमाथि जा’लझेल र ष’ड्यन्त्रको आरोप लगाए ।
संविधानलाई कुल्चने काम भएको र ह त्या नै गर्न खोजिए देश अ’राजकताको भुँमरीमा फस्ने ख’तरा औल्याए । आफू मूलधारको राजनीतिमा आइसकेको तर ओलीको कदमवि’रु’द्ध वि’द्रो’ह गर्नेहरु अरु निस्कने र त्यसलाई द’मन गर्न खोज्दा अराजकता निम्तनसक्ने बताए ।
उनले भने,‘संविधानको ह’ ‘त्या गर्ने कार्य भएमा नेपाल फेरि अ’राजकताको सुरुङभित्र पस्यो ।’
ओलीले देशमा राजा नफर्कने बताए । राजावादी सलबलाएको प्रश्नमा उनले भने,‘सलबलाउनेहरु सलबलाइरहन्छन्, इतिहासको चक्का पछाडि फर्कदैन ।’ उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाइने बताए । आफूमा आवेग र आक्रोश भएको बताए । उनले धेरै सघर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्रको शिशुको ह त्या गर्न खोजिए सहन नसक्ने बताए ।
Previous articleसिपाहीलाई १६ बर्षमा पेन्सन दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित
Next articleखुट्टा मिच्दा-मिच्दै श्रीमानको गोजीमा हात हालेपछि श्रीमतीले जे देखिन्